अध्याय १०८ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मभित्र सबैले विश्राम र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छन्। मदेखि बाहिर रहेकाहरूले न स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छन् न खुसी नै, किनभने मेरो आत्मा तिनीहरूसँग हुँदैन। यस्ता मानिसहरूलाई आत्मारहित मृत भनिन्छ, जबकी मभित्र रहेकाहरूलाई म “आत्मा भएका जीवित प्राणी” भन्दछु। तिनीहरू मेरा हुन्, र तिनीहरू मेरो सिंहासनतर्फ फर्किने निश्चित छ। सेवा गर्नेहरू र दियाबलसका मानिसहरू आत्मारहित मृतक हुन्, र तिनीहरू सबैलाई उन्मूलन गरिनैपर्छ र अस्तित्वहीन बनाइनैपर्छ। यो मेरो व्यवस्थापन योजनाको रहस्य हो, र मानवजातिले ठम्याउन नसक्ने मेरो व्यवस्थापन योजनाको हिस्‍सा हो; तैपनि, यही बेला मैले यसलाई सबैका लागि सार्वजनिक गरिदिएको छु। जो मेरा होइनन् ती मेरो विरुद्धमा छन्; जो मेरा हुन् तिनीहरू मेरो अनुकूल छन्। यो एकदमै अपरिवर्तनीय कुरा हो, र यो शैतानप्रतिको मेरो न्याय पछाडिको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्त सबैलाई थाहा हुनुपर्छ ताकि तिनीहरूले मेरो धार्मिकता र निष्पक्षता देख्न सकून्। शैतानबाट आउने जोकोहीको पनि न्याय गरिनेछ, उसलाई जलाइनेछ, र खरानीमा रूपान्तरित गरिनेछ। यो पनि मेरो क्रोध हो, र यसबाट मेरो स्वभाव थप स्पष्ट हुन्छ। अब उप्रान्त, मेरो स्वभाव खुला रूपमा घोषणा हुनेछ; यो सबै मानिस, सबै राष्ट्र, सबै धर्म, सबै व्यक्तिगत सम्प्रदाय र जीवनका सबै कालखण्डका व्यक्तिहरूका लागि प्रकट हुनेछ। कुनै पनि कुरा लुकाइनेछैन; सबै कुराको खुलासा हुनेछ। मेरा कार्यपछाडिका मेरा स्वभाव तथा सिद्धान्तहरू मानवजातिका लागि सबैभन्दा बढी लुकेका रहस्यहरू भएकाले मैले यो काम गर्नैपर्छ (ताकि ज्येष्ठ पुत्रहरूले मेरो प्रशासनिक आदेशहरूको उल्लङ्घन नगरून्, र सबै मानिस तथा सबै राष्ट्रलाई न्याय गर्नका लागि मेरो खुलासा भएको स्वभावको प्रयोग गर्न सकियोस्)। यो मेरो व्यवस्थापन योजना हो, र मेरा कार्यका चरणहरू यिनै हुन्। यसलाई कसैले पनि हल्‍का रूपमा परिवर्तन गर्नेछैन। मैले मेरो मानवताभित्र मेरो ईश्‍वरत्वको स्वभावलाई पूर्ण रूपमा जिइसकेको छु, त्यसैले मेरो मानवत्वलाई चिढ्याउन म कसैलाई अनुमति दिन्नँ। (मैले जिउने सबै कुरा ईश्‍वरीय स्वभाव हुन्; त्यसैले त मैले म सामान्य मानवत्व पार गर्नुभएका परमेश्‍वर स्‍वयम्‌ हुँ भनेर पहिले नै भनेको छु।) मलाई चिढ्याउनेलाई म पक्कै क्षमा दिनेछैन, र म त्यसलाई अनन्तमा नष्‍ट हुन दिनेछु! याद राख्! मैले गरेको निर्णय यही हो; अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यो मेरो प्रशासनिक आदेशको एक अत्यावश्यक हिस्सा हो। सबैले यो कुरालाई देख्‍नुपर्छ: म रहेको व्यक्ति परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, साथै परमेश्‍वर स्वयम् हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म यो कुरा स्पष्‍ट हुनुपर्छ! म कुनै पनि कुरा लापरवाही भएर बोल्दिनँ। तैँले पूर्ण बुझाइ प्राप्त नगरिञ्‍जेलसम्‍म, म सबै कुरा स्पष्‍ट रूपमा बोल्छु र देखाउँछु।
यो परिस्थिति एकदमै तनावपूर्ण छ; मेरो घरमा मात्रै होइन, बरु योभन्दा बढी, मेरो घरबाहिर तिमीहरूले मेरो नामको गवाही दिएको, ममा जिएको, र सबै पक्षमा मेरो गवाही दिएको म चाहन्छु। यी आखिरी समय हुन्, त्यसकारण अहिले सबै कुरा तयार छन् र सबै कुराले आफ्नो मौलिक स्वरूप कायम राखेका छन्, र यी कुनै पनि कुरा कहिल्यै परिवर्तन हुनेछैन। निकालिनुपर्ने मानिसहरूलाई निकालिनेछ र राखिनुपर्ने मानिसहरूलाई राखिनेछ। बलपूर्वक पक्री राख्न वा पर धकेल्न नखोज्; मेरो व्यवस्थापनमा बाधा पुर्‍याउने वा मेरो योजनालाई नष्ट गर्ने प्रयास नगर्। मानवीय दृष्टिकोणबाट म मानवजातिप्रति सधैँ प्रेमिलो र करुणामय छु, तर मेरो दृष्टिकोणबाट, मेरो कार्यको चरणअनुसार मेरो स्वभाव फरक हुन्छ, किनभने म स्‍वयम्‌ व्यावहारिक परमेश्‍वर हुँ; म स्वयम् अद्वितीय परमेश्‍वर हुँ। म अपरिवर्तनीय र सदा परिवर्तनीय दुवै हुँ। यो कसैले पनि ठम्याउन नसक्ने कुरा हो। मैले तिमीहरूलाई यसबारे बताउँदा र व्याख्या गर्दा मात्रै तिमीहरूले यसको स्पष्‍ट बुझाइ प्राप्त गर्नेछौ र बुझ्न सक्नेछौ। मेरा पुत्रहरूका लागि म प्रेमिलो, करुणामय, धर्मी र अनुशासन कायम गर्ने हुँ, तर आलोचक होइन (र मैले यसो भन्नुको अर्थ, म ज्येष्ठ पुत्रहरूको विनाश गर्दिनँ भन्ने हो)। मेरा पुत्रहरूबाहेकका मानिसहरूका लागि, युगहरूको चालअनुसार म कुनै पनि समयमा परिवर्तन हुन्छु: म प्रेमिलो, करुणामय, धर्मी, प्रतापी, आलोचक, क्रोधले भरिएको, श्राप दिने, जलाउने, र अन्ततः, तिनीहरूको देहको विनाश गर्ने हुन सक्छु। विनाश हुनेहरू आफ्नो आत्मा र प्राणसँगै नष्‍ट हुनेछन्। तैपनि, सेवा प्रदान गर्नेहरूका लागि, तिनीहरूको आत्मा र प्राण मात्रै कायम राखिनेछ (र म यसको अभ्यास कसरी गर्छु भन्नेबारे विवरणको सम्बन्धमा, म तिमीहरूलाई पछि भन्नेछु, ताकि तिमीहरूले बुझ्न सक)। तर, तिनीहरूसँग कहिले पनि स्वतन्त्रता हुनेछैन र तिनीहरूलाई कहिले पनि रिहा गरिनेछैन, किनकी तिनीहरू मेरा मानिसहरूभन्दा तल छन्, र मेरो मानिसहरूको नियन्त्रणमा छन्। सेवा गर्नेहरूप्रति मैले यति धेरै घृणा गर्नुको कारण तिनीहरू ठूलो रातो अजिङ्गरका सन्तति भएकाले हो, र सेवा नगर्नेहरू पनि ठूलो रातो अजिङ्गरकै सन्तति हुन्। अर्को शब्दमा, ज्येष्ठ पुत्रहरूबाहेक सबै मानिसहरू ठूलो रातो अजिङ्गरका सन्तति हुन्। मैले अनन्त विनाशमा परेकाहरूले मेरो चिरस्थायी प्रशंसा गर्छन् भनेर भन्नुको अर्थ तिनीहरूले मलाई सदैव सेवा प्रदान गर्नेछन् भन्ने हो। यो कुरा ढुङ्गामा लेखिएसरह छ। ती मानिसहरू सधैँ दास, वस्तुभाउ, र घोडाहरू हुनेछन्। म तिनीहरूलाई कुनै पनि समयमा मार्न सक्छु, र मेरो इच्छाअनुरूप तिनीहरूलाई दबाउन सक्छु, किनकी तिनीहरू ठूलो रातो अजिङ्गरका सन्तति हुन् र तिनीहरूसँग मेरो स्वभाव छैन। साथै तिनीहरू ठूलो रातो अजिङ्गरका सन्तति भएकाले, तिनीहरूसँग त्यसकै स्वभाव हुन्छ; अर्थात्, तिनीहरूसँग जनावरको स्वभाव हुन्छ। यो कटु सत्य हो, र अनन्तसम्म परिवर्तन हुँदैन! यसो हुनुको कारण यी सबै मद्वारा पूर्वनिर्धारित छन्। यसलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन (मेरो भनाइको अर्थ, यो नियमविपरीत कार्य गर्न म कसैलाई पनि अनुमति दिनेछैन); यदि तैँले प्रयास गरिस् भने, म तँलाई आक्रमण गर्नेछु।
मेरो व्यवस्थापन योजना र मेरो कार्य कुन चरणमा पुगेको छ भनेर हेर्न तिमीहरूले मैले खुलासा गरेका रहस्यलाई हेर्नुपर्छ। म आफ्नो हातले के गर्छु र मेरा न्याय र क्रोध कस्ता मानिसमाथि पर्छन् भनेर हेर्। यो मेरो धार्मिकता हो। म मेरो कार्यको खाका र मेरो योजनाको व्यवस्थापन मैले खुलासा गरेका रहस्यअनुसार गर्छु। यो कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन; यो मेरो इच्छाअनुसार, चरणबद्ध रूपमा गरिनुपर्छ। मेरो कार्य सञ्चालन हुने मार्गहरू रहस्य हुन्, र ती मेरो व्यवस्थापन योजनाका चरणबारे सूचना दिने सङ्केत हुन्। मेरा रहस्यहरूमा कसैले जोड-घटाउ गर्नेछैन, किनकी यदि रहस्य गलत भएमा, मार्ग गलत हुन्छ। मैले मेरा रहस्यहरू तिमीहरूका लागि किन खुलासा गर्दैछु? यसको कारण के हो? तिमीहरूमध्ये कसले स्पष्‍ट रूपमा भन्न सक्छ? यसका साथै, मैले रहस्यहरू मेरा मार्ग हुन् भनेर भनेको छु, उसोभए यी मार्ग के हुन्? यो तिमीहरू देहबाट शरीरमा जाने प्रक्रिया हो, र यो महत्वपूर्ण चरण हो। मैले मेरा रहस्यहरूको खुलासा गरेपछि, मानिसहरूका धारणा बिस्तारै हट्छन् र तिनीहरूको सोच बिस्तारै कमजोर हुन्छ। यो आत्मिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले, म मेरा कामहरू चरणबद्ध रूपमा हुन्छन् भनेर भन्छु, र यो अस्पष्‍ट छैन; यो वास्तविकता हो, र मेरो काम गर्ने तरिका यही हो। यसलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन, न कसैले हासिल नै गर्न सक्छ, किनकी म स्वयम् अद्वितीय परमेश्‍वर स्वयम् हुँ! मेरो काम मबाटै व्यक्तिगत रूपमा सम्पन्न हुन्छ। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मद्वारा मात्रै नियन्त्रित हुन्छ, र मद्वारा मात्रै प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। मेरो कुरा नसुन्ने साहस कोसँग छ? (“मद्वारा मात्रै” भन्नुको अर्थ परमेश्‍वर स्वयम् भन्ने हो, किनभने म रहेको व्यक्ति परमेश्‍वर स्वयम् हुनुहुन्छ—त्यसैले तेरा धारणाहरूमा यति धेरै अडिग नबन्।) मेरो विरुद्धमा जाने साहस कसको छ? तिनीहरूलाई कडा दण्ड दिइनेछ! तिमीहरूले ठूलो रातो अजिङ्गरको प्रतिफल देखेका छौ! त्यो त्यसको अन्त्य हो, तर यो अपरिहार्यता पनि हो। उक्त कार्य म स्वयम्‌ले नै गर्नुपर्छ ताकि ठूलो रातो अजिङ्गर लज्जित होस्। त्यो कहिल्यै फेरि उठ्न सक्दैन, र त्यो अनन्तकालका लागि विनाश हुनेछ! अब म रहस्यहरूको खुलासा गर्न जाँदैछु। (याद राख! खुलासा गरिएका धेरैजसो रहस्य तिमीहरूले प्रायजसो बोल्ने गरेका तर कसैले नबुझ्ने कुरा हुन्।) मानिसहरूले सम्पन्न नभएको भनेर देख्ने सबै कुरा मेरो नजरमा पूरा भइसकेका छन् भनेर मैले भनेको छु, र मैले सुरु हुँदै गरेको रूपमा देखेका कुरा, मानिसहरूका लागि पूरा भएको जस्तो देखिन्छ। के यो विरोधाभास हो? होइन। मानिसहरूले यसरी सोच्छन् किनभने तिनीहरूका आफ्नै धारणा तथा सोचाइ छन्। मैले योजना बनाउने कुरालाई मेरा वचनहरूबाट नै पूरा गरिन्छ (मैले स्थापित हुनू भन्दा ती स्थापित हुन्छन्, र मैले सम्पन्न हुनू भन्दा ती सम्पन्न हुन्छन्।) तर मैले भनेका कुरा पूर्ण भएका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यसको कारण के हो भने, मैले गर्ने कामहरूमा समयको सीमितता हुन्छ। त्यसैले, म यी कुरालाई अपूर्ण देख्छु, यद्यपि मानिसहरूको शारीरिक नजरमा (समयबारे तिनीहरूको बुझाइमा रहेको भिन्नताका कारण), यी कुरा पूरा भइसकेका छन्। आजकल, मैले खुलासा गर्ने रहस्यहरूले गर्दा धेरै मानिस मेरो बारेमा शङ्का गर्छन्। वास्तविकताको सुरुवात भएकोले र मेरा अभिप्रायहरू मानिसहरूको धारणासँग मेल नखाने भएकाले, तिनीहरू मेरो प्रतिरोध गर्छन् र मलाई नकार्छन्। यो त शैतान आफ्नै चालको पासोमा पर्नु हो। (तिनीहरू आशिष् प्राप्त गर्न चाहन्छन्, तर तिनीहरूका धारणाभन्दा परमेश्‍वर यति हदसम्‍म बाहिर पुग्नुहुनेछ भनेर तिनीहरूले अपेक्षा गरेका हुँदैनन्, त्यसैले तिनीहरू पछि हट्छन्)। यो मेरो कार्यको प्रभाव पनि हो। सबै मानिसहरूले मेरो प्रशंसा गर्नुपर्छ, मेरो लागि जयकार गर्नुपर्छ, र मलाई महिमा दिनुपर्छ। सम्पूर्ण कुरा नै मेरो हातमा छ, र सम्पूर्ण कुरा नै मेरा न्यायभित्र छ। जब सबै मानिस मेरो पर्वतमा ओइरिन्छन्, र जब ज्येष्ठ पुत्रहरू विजयी भएर फर्किन्छन्, त्यो नै मेरो योजनाको अन्तिम बिन्दु हुनेछ। त्यो मेरो छ हजार वर्षीय व्यवस्थापन योजनाको समापनको क्षण हुनेछ। सबै कुरालाई मैले व्यक्तिगत रूपमा मिलाएको हुन्छु; मैले पहिले नै यो कुरा धेरै पटक भनेको छु। तिमीहरू अझै पनि आफ्नै धारणाभित्र जिउने भएकाले, मेरो योजनामा बाधा पुग्ने गरी तिमीहरूबाट कुनै गल्ती नहोस् भन्नका लागि मैले यो कुरालाई बारम्बार जोड दिनुपर्छ। मानिसहरूले मलाई सहयोग गर्न सक्दैनन्, न तिनीहरू मेरो व्यवस्थापनमा सहभागी नै हुन सक्छन्, किनभने तिनीहरू अझै पनि देह र रगतका हुन् (तँ मेरो भए पनि, तँ अझै देहमा नै जिउँछस्)। तसर्थ, देह र रगतका मानिसहरूले मेरो उत्तराधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन्। आत्मिक क्षेत्रमा तिमीहरूले प्रवेश गर्नुपर्ने मुख्य कारण पनि यही हो।
संसारमा, भूकम्‍पहरू जानु विपत्तिको सुरुवात हो। सुरुमा म संसार अर्थात् पृथ्वीलाई परिवर्तन गर्छु, त्यसपछि केही महामारी र अनिकाल ल्याउँछु। मेरो योजना यही हो, र मैले अपनाउने चरणहरू यिनै हुन्, अनि मेरो व्यवस्थापन योजनालाई पूरा गर्नको लागि म सबै कुरालाई मेरो सेवाको निम्ति परिचालन गर्नेछु। यसरी, मेरो प्रत्यक्ष हस्तक्षेपविना पनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नष्‍ट हुनेछ। मैले पहिलो पटक देहधारण गर्दा र म क्रूसमा टाँगिदा, पृथ्वी भयङ्कर रूपले कम्पित भएको थियो, र अन्त्य आउँदा पनि यस्तै नै हुनेछ। मैले देहबाट आत्मिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै भूकम्पहरू सुरु हुनेछन्। यसरी, ज्येष्ठ पुत्रहरूले बिलकुलै विपत्तिहरूको कष्‍ट भोग्नेछैनन्, जबकि जो ज्येष्ठ पुत्रहरू होइनन् तिनीहरूलाई भने विपत्तिमाझ कष्‍ट सहन छोडिनेछ। त्यसकारण, मानव दृष्टिकोणबाट हरेक व्यक्ति जेठो छोरो बन्न इच्छुक छन्। मानिसहरूको पूर्वबोधमा, यो आशिष्‌को आनन्द लिनको लागि होइन, बरु विपत्तिको कष्‍टबाट उम्कनको लागि हो। यो ठूलो रातो अजिङ्गरको चाल हो। तथापि, म यसलाई कहिल्यै पनि त्यसै भाग्न दिनेछैनँ; म यसलाई मेरो कठोर दण्ड भोग्न लगाउनेछु र मेरो निम्ति खडा हुन र मलाई सेवा प्रदान गर्न लगाउनेछु (यसले मेरा छोराहरू र मेरा मानिसहरूलाई पूर्ण बनाउने कार्यलाई जनाउँछ), र यसरी यसलाई सदासर्वदा आफ्नै षड्ययन्त्रको जालमा आफै पर्ने, सदासर्वदा मेरो न्याय स्वीकार गर्ने, र सदासर्वदा मद्वारा जलाइने तुल्याउँछु। सेवाकर्ताहरूलाई मेरो प्रशंसा गर्न लगाउनुको साँचो अर्थ यही हो (यसको मतलब, मेरो महान् शक्ति प्रकट गर्नको लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नु हो)। म ठूलो रातो अजिङ्गरलाई मेरो राज्यमा लुसुक्क छिर्न दिनेछैन, न त यसलाई मेरो प्रशंसा गर्ने अधिकार नै प्रदान गर्नेछु! (किनकि यो योग्य छैन; यो कहिल्यै पनि योग्य हुनेछैन!) म यो ठूलो रातो अजिङ्गरलाई अनन्तसम्म मेरो सेवा गर्न मात्र लगाउनेछु! म यसलाई मेरो अगाडि लम्पसार पर्न मात्र लगाउनेछु। (अनन्त दण्डमा भएकाहरूभन्दा नाश भएकाहरू राम्रो अवस्थामा हुन्छन्; विनाश भनेको कठोर सजायको अस्थायी स्वरूप मात्र हो, जबकि अनन्त दण्डमा भएकाहरूले अनन्तकालसम्मै कठोर दण्ड भोग्नेछन्। यही कारणले गर्दा, मैले “लम्पसार पर्नु” भन्ने शब्दको प्रयोग गरेँ। यी मानिसहरू मेरो घरमा लुसुक्क छिर्ने र मेरो धेरै अनुग्रहको आनन्द उठाउने, अनि तिनीहरूसँग मेरो बारेमा केही ज्ञान हुने भएकोले, म कठोर दण्डहरू प्रयोग गर्छु। मेरो घरभन्दा बाहिर भएकाहरूको हकमा भने, ती अज्ञानीहरूले कष्‍ट भोग्नुपर्दैन भनेर भन्न सकिन्छ।) मानिसहरूको धारणामा, तिनीहरूले अनन्त दण्डमा भएकाहरूभन्दा विनाश भएकाहरू खराब अवस्थामा हुन्छन् भन्ने ठान्छन्, तर यसको विपरीत, अनन्त दण्डमा भएकाहरू सदासर्वदा दण्डित भइरहन्छन् अनि विनाश भएकाहरू भने अनन्तसम्मै अस्तित्वहीन आवस्थामा फर्कन्छन्।
अघिल्लो: अध्याय १०७
अर्को: अध्याय १०९